Kitra – «Telma coupe de Mada» : ekipa 24 hiatrika ny lalao savaranonando | NewsMada
Kitra – «Telma coupe de Mada» : ekipa 24 hiatrika ny lalao savaranonando
Hanomboka amin’ity faran’ny herinandro ity, ny asabotsy 6 sy alahady 7 aogositra ho avy izao, ny fiadiana ny amboaran’i Madagasikara «Telma Coupe de Madagascar», taranja baolina kitra. Lalao savaranonando no hatao amin’izany ka ekipa 24, avy amin’ireo ligim-paritra 22, ny hiatrika izany. Araka izany, lalao 12 no hotanterahina ka Antananarivo, Toamasina, Fianarantsoa, Fenoarivo Atsinanana, Antsohihy, Ambilobe ary Antsiranana, ny hampiantrano izany, amin’ity dingana voalohany ity.
Ireo ekipa 52 kosa izay nanana filaharana tsara, nandritra ny fifaninanana ny taona 2015, tsy miatrika izany fa avy hatrany dia miandry ny dingan’ny ampaha-32-n-dalana, izay hotanterahina ny 28 aogositra ho avy izao. Anisan’izany, ny Cnaps Sport, tompon’ny anaram-boninahitra farany sy ny AS Adema, laharana faharoa. Fifanintsanana mivantana ity “Telma Coupe de Madagascar” ity, ka izay resy, avy hatrany dia mangoron-damba.
Ankoatra izay, mandalo eto Madagasikara ireo tomponandraikitra avy amin’ny kaonfederasiona Afrikanina (Caf), izay ahitana olona miisa 7. Fitsidihana fanindroany izao, ary tafiditra ao anatin’ny fijerena ireo fotodrafitrasa, handraisan’i Madagasikara ny Can 2017, ho an’ny sokajy U17. Ilay Nizerianina, Elh Tiemogo Ibrahim Moussa, mpikambana ao anatin’ny komity mpanomana ny Can U17, mitarika izany.
Hisy fihaonana amin’ireo tomponandraikitra ara-panjakana sy ny ben’ny tanànan’Antananarivo, ataon’ireto vahiny ireto. Marihina fa haharitra hatramin’ny 7 aogositra izao ny fivahinianan’izy ireo eto Madagasikara.